Yehowa Adansefo Wɔ Wɔn Ankasa Bible Anaa? | NNB
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Colombian Sign Language Corsican Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luvale Luxembourgish Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Martiniquan Creole Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Vlax, Russia) Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Ticuna Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xavante Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Yehowa Adansefo resua Bible a, wɔde Bible ahorow ahorow a nkurɔfo ayɛ na esua. Nanso sɛ Bible a wɔato din Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase no bi wɔ yɛn kasa mu de a, ɛno paa na yɛde sua ade, efisɛ Onyankopɔn din wɔ saa Bible no mu, wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛ, na emu nso da hɔ paa.
Onyankopɔn din wom. Ebinom yɛ Bible a, wɔmfa ɛho anuonyam mma Bible no Wura. Bible baako sei, nnipa bɛboro 70 a wɔboa maa wɔyɛe no, wohwɛ mu a, wubehu wɔn nyinaa din wom. Nanso, saa Bible koro no ara, wɔayi Bible no Wura a ɔne Yehowa Nyankopɔn no din afi mu koraa!
Nanso Onyankopɔn din mpempem pii a nkurɔfo ayiyi afi Bible mu no, wɔn a wɔyɛɛ Wiase Foforo Nkyerɛase Bible no de ahyehyɛ nea ɛhyɛ pɛpɛɛpɛ te sɛ bere a wodii kan kyerɛw Bible no ara. Wɔn a wɔyɛɛ saa Bible no deɛ, ɔbaako mpo din nnim.
Wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛ. Bible a ɛwɔ hɔ nnɛ no, ɛnyɛ ne nyinaa na ne nkyerɛase yɛ pɛpɛɛpɛ te sɛ nea Onyankopɔn ma wodii kan kyerɛwee no. Ɛho nhwɛso baako ni. Bible bi kyerɛ Mateo 7:13 ase sɛ: “Momfa ɔpon teateaa no mu, efisɛ ɔpon a ɛkɔ Ɔbonsam gya mu no sõ, na ɔkwan a ɛkɔ hɔ no, ɛso fa nyɛ den.” Nanso wohwɛ Bible a wodii kan kyerɛwee no a, ɛnka sɛ “Ɔbonsam gya mu,” mmom ɛka sɛ “ɔsɛe mu.” Ɛbɛyɛ sɛ wɔn a wɔyɛɛ saa Bible no de “Ɔbonsam gya mu” hyɛɛ mu efisɛ wogye di sɛ wɔbɛhyew abɔnefo wɔ Ɔbonsam gya mu afebɔɔ. Nanso ɛnyɛ saa na Bible ka koraa. Ɛno nti, Wiase Foforo Nkyerɛase Bible no kyerɛ Mateo 7:13 ase pɛpɛɛpɛ sɛnea Bible a wodii kan kyerɛwee no te. Ɛka sɛ: “Momfa ɔpon teateaa no mu, efisɛ ɔpon a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu.”
Emu da hɔ paa. Sɛ yɛka sɛ wɔakyerɛ biribi ase yiye a, ɛsɛ sɛ ɛne nea wɔhwɛɛ so kyerɛɛ ase no hyia pɛpɛɛpɛ. Afei nso, ɛsɛ sɛ emu da hɔ, na ntease ba mu. Wo deɛ, yɛnhwɛ wei ho nhwɛso baako. Wohwɛ Romafo 12:11 a, Kristoni ɔsomafo Paul kaa asɛm bi wɔ hɔ. Sɛ yɛkyerɛ ase traa a, ɛkyerɛ sɛ “wobɛma honhom no ahuru.” Twi mu no, ntease biara nni saa asɛm no mu, enti Wiase Foforo Nkyerɛase no akyerɛ ase ama emu ada hɔ. Ɛka kyerɛ Kristofo sɛ ‘wɔnyɛ hyew honhom mu.’
Wiase Foforo Nkyerɛase no, Onyankopɔn din wom, wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛ, na emu nso da hɔ paa. Nea ɛka ho bio a ɛma ɛda mu fua ne sɛ, yɛde ma nkurɔfo a yennye sika biara. Ɛno nti, nnipa mpempem pii tumi kenkan Bible no wɔ wɔn kurom kasa mu. Wɔn a anka wonni sika a wɔde bɛtɔ Bible no, wɔn mpo nya bi kenkan.
Share Share Yehowa Adansefo Wɔ Wɔn Ankasa Bible Anaa?